Friday March 10, 2017 - 08:52:52 in Wararka by Super Admin
Tan iyo markii 08-02-2017 xilka madaxweynaha DF loo doortay Maxamad Cabdullaahi Farmaajo, waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay in ka badan labaatan weerar oo lagu dilay mas'uuliyiin, saraakiil iyo askar ka tirsan DF.
Rag hubeysan ayaa kheyre ku beegsaday isgoyska Cali kamiin degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdihso, waxaana marka oday la dilo caasimadda caan ka noqotay iney dadku is weydiiyaan su’aalo ay kamid yihiin ma xildhibaanada ayuu wax kasoo xulay?.
March 08, 2017 weerar kale oo toogasho ah ayaa ka dhacay degaanka Ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Rag hubeysan ayaa beegsaday C/laahi Kabaweyne oo kamid ahaa ergadii xildhibaanadaku soo dooratay Galmudug.
Iskusoo wada duuboo dhacdooyinkan silsiladda ah ee khasaaraha dhaliyay ayaa dhacay 30 maalmood gudahood ama laga soo billaabo tan iyo markii Farmaajo la doortay, tanina waxay muujineysaa fashilka amni ee durbadiiba ku billowday dowladdiisa.